ओपन क्याम्पस के हो? (1/3) | विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि ओपन क्याम्पस गाइड | アクセス日本留学 - जापान अध्ययन विदेश भ्रमणका लागि विदेशी विद्यार्थीहरू (अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू)
विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि क्याम्पस गाइड खोल्नुहोस्
ओपन क्याम्पस के हो?
"खोल क्याम्पस" एउटा कार्यक्रम हो जुन सबैलाई विद्यालयमा लैजान को लागी योजना को राम्रो तरिकाले बुझ्न र बुझ्न योजना हो। केहि विद्यालयहरू हुन सक्छ "अनुभव प्रवेश"।
वास्तवमा, त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन मलाई थाहा छैन जब सम्म म स्कूल जान्छु। स्कूलहरू ब्रोशरहरू र वेबसाईटहरू हेर्न नसक्दा लामो समयसम्म हुन सक्छ जुन तपाइँलाई चाँडै सम्भव छ जुन विद्यालयको खुल्ला क्याम्पसमा सामेल हुन दिन्छ।
खुला क्याम्पसको सामग्री विद्यालयबाट विद्यालयमा भिन्न हुन्छ, तर यहाँ हामी तपाईंलाई कुन प्रकारको कार्यक्रम ठोस रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ भनेर देखाउनेछौं।
मुख्य कार्यक्रम सकियो
प्रवेश अधिकारीहरूको रूपमा विद्यालयका अधिकारीहरूले सम्पूर्ण विद्यालयमा व्याख्या गर्नेछन्।
हामी प्रवेश र रोजगारी समर्थन केन्द्रित स्नातक विभाग, विभाग, पाठ्यक्रम आदि को बारे मा व्याख्या पछि जीवन परिचय गर्नेछौं जुन विद्यालय मा स्थापित हुन्छ।
यस कार्यक्रममा, आइपुगेको विद्यालयको समग्र तस्वीरलाई बुझ्नुहोस्।
सामग्रीको नि: शुल्क वितरण
हामी अधिक विस्तृत जानकारी, नयाँ जानकारी, अतीत मुद्दा पुस्तक आदि प्राप्त गर्न सक्छ जुन पर्फलेटमा छैन तर हामी खुल्ला क्याम्पसमा जान्छौं।
यस कार्यक्रममा, चलो स्नातक विभाग / विभाग / पाठ्यक्रमको लागि तपाइँलाई चाहानुहुन्छ विस्तृत जानकारी इकट्ठा।
हामी विद्यालयमा सेन्सरहरू र विद्यालयका कर्मचारीहरूसँग सुविधामा सुविधाहरू र सुविधाहरू भेट्नेछौं।
स्कूलमा हिड्दा, तपाईं सँग प्रश्न सोध्न स्वतन्त्र महसुस गर्ने मौका छ। ब्रोशर र वेबसाईटहरू हेर्ने क्रममा तपाईले के बुझ्नु भएन वरिष्ठ र कर्मचारी सदस्यहरू सोध्न स्वतन्त्र महसुस गरौं, तपाइँ भ्रमणको समयमा के चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो।
यस कार्यक्रममा भाग लिँदा, वास्तवमा मार्फत छवि टाँस्दै गर्दा यो हिड्न राम्रो हुन्छ।
सिमुलेशन सबक / व्यावहारिक प्रशिक्षण
सामान्यतया, व्याख्यान र व्यावहारिक प्रशिक्षणका शिक्षकहरू विद्यालयमा प्रवेश गर्नु अघि सबैको लागि बुझ्न सजिलो सामग्री संग वास्तविक कक्षाहरू गर्नेछन्।
वास्तवमा अनुभवको अनुभव गरेर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कंक्रीट सिक्नको तस्बिर दृश्यात्मक हुनेछ। आइतबार तपाइँ सिमुलेटेड सबक वा अभ्यास गरिरहनुमा भाग लिनुहोस्।
कृपया यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो वेबसाइटलाई वेबसाइटमा पुष्टि गरिएको छ किनभने त्यहाँका सहभागिता कोटा तय गरिएको छ वा यो पहिले आवेदन गर्न आवश्यक हुन सक्छ।
यो एक कार्यक्रम हो जुन तपाइँले क्याफेटेरिया क्याम्पसमा खोलेर नि: शुल्क आधारमा बेचन गर्नुभएको मेनुको अनुभव गर्न अनुमति दिन्छ।
वरिष्ठ परामर्श कुना
यो एउटा कार्यक्रम हो जुन तपाईं सीधा विद्यार्थीहरु संग प्रत्यक्ष कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जुन वर्तमानमा विद्यालयमा भाग लिइरहेका छन्।
तपाईं स्कूलको वातावरण, अध्ययन विधि जस्ता परामर्श बारे प्रश्नहरू जस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईं के बारे मा अप्रिय महसुस गर्नुहुन्छ। यो खुल्ला क्याम्पसमा मात्र हो कि तपाईं स्कूलका राम्रो बिन्दुहरू सुन्न सक्नुहुन्छ जस्तै विद्यार्थीहरूले जो कि ब्रोशर र एक्लो वेबसाइटहरू मार्फत देख्न सक्दैनन्।
यस कार्यक्रमको साथ, विद्यार्थीले विद्यार्थी जीवनको वास्तविक अवस्था देख्न सक्दछ।
व्यक्तिगत परामर्श खण्ड
यो एक कार्यक्रम हो जुन विद्यालयका अधिकारीहरूमा सबैलाई सोध्न सकिन्छ, एक वा सानो समूहले समूहमा विभाजित गर्दछ।
तपाईं कुन कुराको बारे मा सोच्नु वा चिन्तित हुनुहुने कुनै पनि विवरण सोध्न सक्नुहुन्छ, जस्तै स्कूलमा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको वरिष्ठ राज्य, जीवनको रूपमा समर्थन प्रणाली जस्तै तपाईलाई मद्दत चाहिन्छ।
यो कार्यक्रममा भाग लिन को लागी एक राम्रो विचार हो जुन तपाईले पहिले सोध्न चाहानुहुन्छ कि एक नोट बनाउन पछि।
प्रवेश परीक्षा तयारी कोर्स
हामी तपाईंलाई प्रवेश परीक्षा प्रवृत्तहरू र काउन्टरमेराहरू, कठिनाई स्तर, अतीतको टिप्पणी र यति बारेमा बताउनेछौं।
त्यहाँ पनि त्यस्ता मामलाहरू छन् जहाँ तपाइँ परीक्षाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू, सिफारिस प्रवेश परीक्षा, एओ प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन, स्वीकृति मापदण्डका लागि विशेष चयनको विवरण। केही विद्यालयहरूमा खुला क्याम्पसमा सहभागिता हुन सक्छ प्रवेश परीक्षा विधिको आधारमा अनुप्रयोगको लागि आवश्यक हुन सक्छ, त्यसैले जब यो कार्यान्वयन भएमा सहभागीलाई आमन्त्रित गर्न दिनुहोस्।
यस कार्यक्रममा सहभागी गरेर, तपाईं आफैंको लागि सही प्रविष्टि विधि पाउन सक्नुहुन्छ।
विद्यार्थी छात्रावास भ्रमण
तपाईं विद्यार्थी डर्मिटरी हेर्न सक्नुहुन्छ।
विद्यालयको आधारमा, तपाइँ एक दिनको लागि एक अनुभव शरारतीको रूपमा रहन सक्नुहुन्छ। यो पहिले नै पुस्तक बुक गर्न आवश्यक हुन सक्छ, कृपया स्कूल वेबसाइट आदिसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी समर्थन प्रणालीको व्याख्या
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि विशेष कार्यक्रमहरू उपलब्ध हुन सक्छन्।
हामी तपाईंलाई स्कुलशिप, विद्यार्थी छात्रावास, स्वास्थ्य हेरविचार, आदानप्रदान कार्यक्रम, आदि, परामर्श डेस्क आदि जस्ता विद्यालय पठाउन आवश्यक आवश्यक प्रणालीको बारेमा बताउनेछौं।
विद्यालयमा निर्भर हुँदा खुला परिसर वा प्रवेश परीक्षामा सहभागिता गर्दा, त्यहाँ एक प्रणाली हुन सक्छ जुन परीक्षा शुल्क निःशुल्क र प्रवेश शुल्क सस्ता गर्दछ।
जब म स्कूल पुग्छु, म पहिलो स्वागत स्वागत गर्दछु।
हामी स्पष्टीकरणको लागि आवश्यक सामग्री पाउनेछौं। तपाईंलाई इच्छित स्नातक विभागको लागि सोधिएको हुन सक्छ, विभाग, पाठ्यक्रम, आदि। ब्रोशर आदि द्वारा अग्रिम नामको अन्वेषण गरौं। यदि तपाईं हराउनुभएको छ भने, यदि तपाईंले अझै निर्णय गर्नुभएको छैन भने, तपाईंले त्यसो गर्नु पर्छ।
② स्कूल विवरण
म कक्षा कोठामा बस्न र स्कूलको बारेमा सबै कुरा सुन्नेछु।
प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र व्याख्या सुनाउँदा बाहिर आए प्रश्नहरू, म एक नोट राख्नेछु। विद्यालय व्याख्या वा व्यक्तिगत परामर्श पछि प्रश्न सोध्दा मेमोको सामग्री सुन्नुहोस्।
③ विभिन्न कार्यक्रमहरू
विद्यालयमा निर्भर छ, त्यस्ता घटनाहरू हुन सक्छ जहाँ सबै कार्यक्रमको लागि सबैको लागी गरिन्छ, र यदि तपाईं स्वतन्त्र रूपमा जानुहुन्छ र तपाईंको मनपर्ने कार्यक्रममा भाग लिन सक्नुहुन्छ। कृपया स्कूलका अधिकारीहरूको निर्देशनहरू पछ्याउनुहोस्।
त्यस्ता घटनाहरू छन् जहाँ सबै सदस्यहरू एकैचोटि सबैलाई समाप्त गर्छन् र समाप्त हुने व्यक्तिबाट फर्काउँछन्।
सामग्री र विद्यालय मूल वस्तु आदि। म मेरो व्यक्तिगत सामान पुष्टि गर्न पछि फर्कनेछु ताकि त्यहाँ कुनै बिर्सिएका वस्तुहरू छैनन्।
विद्यालयको आधारमा त्यहाँका घटनाहरू हुनसक्दछ जहाँ अग्रिम आरक्षण आवश्यक छ, वा जब सहभागीहरू अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग सीमित छन्। प्रत्येक विद्यालयले एक वर्षमा धेरै दिन राख्छ, त्यसैले यदि तपाइँ खुल्ला क्याम्पसमा सामेल हुन योजना बनाउनुहुन्छ, पहिला स्कूलको वेबसाइट जाँच गर्नुहोस् र समय तालिका जाँच गर्नुहोस्।
यदि तपाईं सबै माध्यमद्वारा नामित मितिमा भाग लिन सक्नुहुन्न भने, प्रायजसो विद्यालयहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा देख्न अनुमति दिन्छन्, त्यसैले तपाईं ई-मेल वा फोनद्वारा हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहानुहुन्छ।
खुला क्याम्पसमा सामेल हुनुभन्दा पहिले, कृपया प्याामफिल्ट्स र वेबसाईटहरू राम्ररी पढ्न र नोटहरू बनाउनुहोस् र तपाइँ कुन कुरा हेर्न चाहानुहुन्छ र जुनसुकै शिविरमा जानुहुन्छ जुन क्याप्ससमा जान्छ।
पोइन्ट2मा, मैले आठ अंकहरू संक्षेप गरिरहेको छु जब म खुल्ला क्याम्पसमा सामेल हुन चाहन्छु। सबै माध्यमद्वारा, कृपया यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
खुला क्याम्पसमा सामेल भएपछि
क्याम्पस Q&A खोल्नुहोस्
CC पहुँच नेतृत्व कं, लिमिटेड